Sein Lyan - စိ န် လျှံ: ဖေဖေနဲ့မေမေသို့ (အိတ်ဖွင့်ပေးစာ)
Writer Sein Lyan Time 1:09 pm
Please don't let current situation get you down, I mean "job hunting". As far as I notice, you are still young, competitive, and I believe you are an asset to any company you apply for. During these days, try to be in good health for your family and yourself.
မိဘနဲ့မောင်နှမတွေအပေါ် နားလည်သိတတ်တဲ့ မောင်လေးဖိုးစိန် စင်္ကာပူမှာ မကြာခင် အလုပ်ရဖို့ မဇွန် ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Never give up & do your best! Luck will follow you.
And please do not forget Dhamma.
ဒီနှစ် ခရစ်စမတ် ရော
ဘယ်မှာ တဲ ထိုးဖို့
ဘယ်လို ရှိလဲ ... :D
ဟားဗားဖရန့် သွားရင် ကောင်းမလား.. :D
အရင်က အနော်နီးမက်စ် နဲ့ ပေးလို့ရသလိုလို ပဲ ..
ပိတ်လိုက်တာလား ... ?????
ကံ ဥာဏ် ၀ိရိယ မှာ ကိုဖိုးစိန်က ဥာဏ် ၀ိရိယ အဆင်သင့်ရှိတာပဲ ကံပေါ်လာတာနဲ့ အလုပ်ရမှာပါ။ ရချင်ရင် ခဏလေးပါ။ ဒီအချိန်တွေက အလုပ်ရှာလို့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အချိန်ပေး နိုင်ရင် ပဌာန်းဒေသနာတော် ရွတ်ပေးပါ။ CV ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ပါ။ လူခံရှိရင်လည်း Internal နဲ့ အလုပ်ဝင် ဖို့ မေးကြည့်ရမှာပဲ။ စိတ်ရှည်ပါ။ ကျွန်မ(၆) လတောင် အလုပ်ရှာခဲ့ရပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အဲဒီလောက် ရှာရမယ် လို့ မထင်မိဘူး။
အလုပ်ရပါစေ ။ မိဘများ နှင့် နွေးထွေးသော
မိသားစု ဘ၀မှာ ပျော်ရွှင်စွာ အနာဂတ်လမ်းကို
ငြိမ်းချမ်းမှုများ စိုးမိုးလျက် ပညာဖြင့် ဦးဆောင်နိုင်ပါစေ
လုပ်သလိုမဖြစ်ပေမယ့် ဖြစ်သလိုလုပ်နိုင်နေသေးတာပဲ အကို့ကို နားလည်ပေးနိုင်ကျမယ်ထင်ပါတယ်
25 December 2010 at 16:24
မိဘအပေါ် သိတတ်တဲ့ သားသမီးဟာ ဘာလုပ်လုပ်အဆင်ပြေတတ်ပါတယ်... ဒုက္ခရောက်ရင်တောင် ကူညီမဲ့သူအလိုလို ပေါ်လာတတ်တာပါ ( ကျမရဲ့အတွေ့အကြုံအရ) ...
28 December 2010 at 00:56
ရရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်သာ ထည့်ထားလိုက်ပါး))
ဘာပဲဖြစ်ြဖစ် စိတ်မညစ်နဲ့ ..း))